Why Masakadza was wrong choice for captaincy Hamilton Masakadza was on song on the recent Bangladesh tour, but is prone to loss of form. - NewZimbabwe.com Why Masakadza was wrong choice for captaincy Hamilton Masakadza was on song on the recent Bangladesh tour, but is prone to loss of form. - NewZimbabwe.com
Why Masakadza was wrong choice for captaincy Hamilton Masakadza was on song on the recent Bangladesh tour, but is prone to loss of form.
In Zimbabwe, Tatenda Taibu had similar traits. Anointed Zimbabwe’s captain at the age of 21, endorsed and highly recommended by such senior players as Andy Flower and Guy Whittall, Taibu had a very good cricketing brain and had the makings of a very good leader over many years had his international career not suffered unfortunate interruption due to boardroom politics.Advertisement